musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » COVID-19 furlough inopera panguva yakaipisisa yekushanya kweUK
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
COVID-19 furlough kupera inouya panguva yakaipisisa yekushanya kweUK
Vanoongorora nezvemaindasitiri vanofungidzira UK yekumba kufamba kuenda kudzoka kumazinga e2019 panguva ya2022, painosvika mamirioni gumi nematanhatu. Nekudaro, nzendo dzekunze dzinobuda dzinotora nguva yakareba uye hadzizodzokere kumatanho e-pre-COVID kusvika 123.9, pavacharova 2024 miriyoni nzendo.
Kupera kwe furlough hakukwanise kusvika panguva yakaipa yegore yeiyo UK yekufambisa indasitiri.
Kunyangwe UK yekumba kudzoka kuri munzira ye2022 rebound, iyo indasitiri inofanirwa kutanga yagara yakaoma nguva yechando nguva yekutanga.
Kurova chiyero kunokonzera kutemwa nemusoro kwemafemu mazhinji ekufamba - kunyanya iwo anovimba zvakanyanya pakufamba kwenyika dzese.
Nechirongwa cheUK chekusvinura chakatemwa kupera mwedzi uno, makambani ekufambisa achamanikidzwa kudzikisa mari kuitira kuti vararame munguva yechando. Vanamuzvinabhizimusi vezvekufambisa nevekushanya vanoyambira kuti matanho akadaro anogona kusanganisira kudzikiswa.
Kupera kwe furlough hakukwanise kusvika pa yakaipa nguva yegore yeUK yekufambisa indasitiri. Mwaka wakaoma wechando wave pamusoro pedu, uye matanho-ekuderedza mitengo anozokosha pakupona. Nehurombo, izvi zvinoreva kuti redundancies ingangoita, sezvo iyi iri imwe yenzira dziri nyore kwazvo dzekuchengetedza mari.
Maindasitiri vaongorori vanofungidzira UK yekufambisa epamba kudzokorodza kumatanho e2019 panguva ya2022, apo ichazosvika mamirioni 123.9 enzira. Zvisinei, pasi rose nzendo dzinoenda kunze dzinotora nguva yakareba uye hadzizodzokere kumatanho e-pre-COVID kusvika 2024, pavacharova 84.7 miriyoni nzendo.
Kunyangwe kudzoka mudzimba kuri munzira ye2022 rebound, iyo indasitiri inofanirwa kufamba nenzira inowanzoomera nguva yechando kutanga. Pasina kudiwa kwakaringana, mari dzinozoenderera dzichimanikidzwa uye makambani achanetseka. Chiyero chakanaka chinofanirwa kurohwa pakati pekudzikunurwa uye nekukurumidza agility.
Maindasitiri nyanzvi zvakare anongedzera njodzi dzekudonhedza nhamba dzevashandi kumakambani ekufambisa eUK, Kana makambani akatanga kuita kuti vashandi vawedzere, havakwanisi kupindura kukwirisa kwekukasira kuri kudiwa. Kurova chiyero kunokonzera kutemwa nemusoro kwemafemu mazhinji ekufamba - kunyanya iwo anovimba zvakanyanya pakufamba kwenyika dzese. Iko kuchinjika kuchinjika kwechimiro chekurambidzwa kwekufamba kunogona kuona kamwe kamwe spike mukuda kweimwe nzvimbo dzekuenda nekukurumidza. Kana femu ikashomeka vashandi, inogona kupotsa mari inodiwa. Zvakare, kuchengetedza vashandi vakawandisa kunogona kukonzeresa mumitengo inokwira kunze kwekudzora.
Kuwedzera iyo furlough scheme yeindasitiri yekufamba inogona kutenga nguva yechikamu kudzamara kudiwa kwatanga kusimba. Zvisinei, tariro yacho ishoma.